Chinese to English Dictionary ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါ
ကျွန်တော်တို့ အွန်လိုင်းမှာ 喜阿婆 လေးတွေနဲ့ ကျူကြတဲ့အခါ
မိမိက တစ်ကယ်တရုတ်စာကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင် ဒီကောင်လေး
ကအဆင်ပြေပါတယ်။ တရုတ်စာတွေကနေပီးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုကို
你怎么样 UZARNI ပေါ့.......။ စိတ်ဝင်စားလို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်
Posted by အာရှ သား No comments:
တိန်.... ခေါင်းစဉ်ကြီးက ကြောက်စရာကြီး G-mail or G-talk Account
ဘယ်လိုခိုးမလည်း...တဲ့.... တစ်ကယ်တမ်းကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ
သွားအသုံးပြုတဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို Fake Program နဲက အစစ်ကိုကွဲ
ကွဲပြားပြားသိရအောင်ရည်ရွယ်ပီး တင်ပေးတာပါ။ တစ်ဘက်သားဒုက္ခ
နည်းပညာလေ့လာသူတွေ ဒီထက်မကတိုးတက်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဦးဇာနည်မှ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
CHKDSK Command နဲက Hard Disk Error တွေကို အနည်းငယ်ရှင်းမယ်
သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Data Partition တွေကိုဖွင့်ရတာ
ကြာနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Program တွေကိုဖွင့်ရတာကြာ
နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ FB Group တွေမှာ မိမိလိုချင်တာတွေဘယ်လိုရှာမလည်း
အ၇င်ဆုံး Posting Request မလုပ်ခင်အ၇င်
ဒါမှလည်း ဂရု အက်ဒမင်တွေအတွက်အဆင်
Posted by အာရှ သား 1 comment:
Java Programming ကို မြန်မာလိုဖတ်ချင်
တဲ့ညီလေး၊ ညီမလေးတွေအတွက် စာအုပ်
Posted by အာရှ သာ3းcomments:
ဒီ Converter လေးကတော့ အရမ်းသုံးရတာလွယ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်
DTP လုပ်ငန်းသမားတွေအတွက်ပါ။ဥပမာ မိမိက Innwa နဲ့ရိုက်ထား
တယ် အစိုးရရုံးလုပ်ငန်းဌာနတွေအတွက် တစ်ကယ်တမ်းတင်ရမယ့်အခါ
Myamar 2, Myanmar3စသဖြင့် ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါ ကော်ပီ Paste
လုပ်ပီး Convert လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ.. ကောင်းကြောင်းတွေကိုတော့အများ
ကြီးမညွှန်းချင်တော့ပါဘူး စိတ်ဝင်စားလို့ ဒေါင်းချင်သပဆိုရင်တော့
အင်တာနက်ဂျာနယ်တို့မှာပါတဲ့ Sodoku ကို လျှင်မြန်စွာရှင်းပီးဆုတွေယူမယ် :P
အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ဂျာနယ်တို့၊ Net Guide ဂျာနယ်
တို့မှာပါတဲ့ Sodoku တွေဖြေရှင်းဆုတွေယူပါဆိုတာပါပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက
တော့ ခေါင်းခြောက်အောင် ခဲ့တံ၊ ခဲဖျက်၊ စာရွက်တွေတော်တော်အကုန်ခံပီး
ဖြေပီး အချိန်မီ အလျှင်မြန်ပို့ကြရပါတယ်။ အခုတော့ဒီကောင်လေးသာသင့်
ကွန်ပျူလေးမှာသွင်းထား ပီးတာနဲ့ သူမေးထားတဲ့ ဂဏန်းမေးခွန်းလေးတွေ
ကို အဲဒီအကွက်လေးတွေထဲမှာဖြည့်ပီး Solve ! ဆိုတာလေးကိုသာ Click
လေးသာတစ်ချက်နှိပ်လိုက် ပီးတာနဲ့ ဂျာနယ်တိုက်ကိုချက်ချင်းပို့လိုက်ပါ။
နိုင်ငံခြားရောက် ကိုကို၊ မမ များ တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့
တရားဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်များအတွက် အွန်လိုင်းမှနေပီး တရား
ဘာဝနာများကို အင်တာနက်မှတဆင့် တရားဘ၀နာပွားများနိုင်အောင်
MM RADIO ဆိုတဲ့ ရေဒီယို Program လေးကို တစ်ချက်သွင်းထား
တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များ တရားဘာဝနာများအင်တာနက် မှတဆင့်ပွားများကုသိုလ်ယူနိုင်ရန် ဦးဇာနည်မှ တစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေဒါနပြုပါသည်။
Hacking လောကမှာလည်း ဆေးထိုးတယ်ဆို တာရှိပါတယ် အဲဒါကတော့ SQL Injection အကြောင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Hacking ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ အင်္ဂလိပ်လိုတွေမဖတ်ရမှာပျင်း
ကြတဲ့ Hackers အလောင်းအလျာများအတွက် :P :P :P မြန်မာ
လိုရေးထားတဲ့ Hacking Techniques များအကြောင်း
Dota သမားလောကမှာ ဆေးထိုးတယ် ဆေးထိုးတယ်
ဆိုလိုပဲ Hacking လောကမှာလည်း ဆေးထိုးတယ်ဆို
တာရှိပါတယ် အဲဒါကတော့ SQL Injection အကြောင်း
Hacking ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီလေး၊ ညီမလေးတွေအတွက်
ကောင်းနိုးရာရာ Hacking Tools တွေချည်းပဲစုတည်းပီးတင်
ပေးထားပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ Software နာမည်တွေက
Admin P4Ge FiNd3r IV
စုစုပေါင်းဖိုင်ပမာဏက 17MB ပါ
သင်သုံးနေတဲ့ Firefox ကနေ
HMA! IP Checker 1.5.1
ဆိုတဲ့ Add-on လေးနှစ်ခုသာပစ်ထည့်ထားလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ မူရင်း IP ကိုလည်း Trace လိုက်ဖို့မလွယ်သလို
Cristiano Zarni @ ဦးဇာနည်
Posted by အာရှ သား2comments:
ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ၀င်းဒိုးအသုံးပြုသူအများစု
က Copy Right Version တွေကိုသာ အဓိကထားသုံး
Update လုပ်မိသွားရင် Window Genuine ပြဿနာ
Window Loader ပေါင်းများစွာထဲမှ ဒီကောင်လေးက
တော့ အောက်ဖော်ပြပါ ဗားရှင်းတွေကိုပါ Support
လုပ်ပါတယ်။ဖိုင်စိုက်ဒ်ကလည်း 1MB ပဲရှိတော့ပြည်တွင်း
ဒီ Loader လေးကိုချီးမြှင့်ပေးသော AC Vs DC ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်